Lugood Store ayaa barnaamijyadooda fara badan in aad qaadato ha sawiro tayo leh oo iyaga ka bedel si fudud on your iPad. Chine Kuwani bedeli kartaa sawiro caadi siyaabo cajiib ah oo cajiib ah. Inta badan codsiyada waa la faray dhinaca iPhone, iftiinka xaqiiqada ah in aad sawirro loo qaado oo iyaga si deg deg ah gacanta ku hayso, laakiin kuwo kale ay ku jahaysan iPads kaas oo ay leeyihiin shaashad weyn. Waxaan doonayaa in aan hoos u soo koobto ugu fiican barnaamijyadooda camera iPad oo u oggolaan doonaa inaad isku dubaridi sawiro aad siyaabo kala duwan. Halkan, waxaan ku qor soo baxay 5 Chine in awood doonaa inaad qabato hawlaha la yaab leh in kaliya laptop awood leh ama desktop ah u oofin karin. Ka dhig wax akhriska iyo waxaad ka heli doontaa ee Chine kuwaas oo ugu wanaagsan ee xigtay oo sixiddiisa sawiradaada.
Qaybta 1. Top 5 Camera u barnaamijyadooda iPad
Qaybta 2. Sida loo Isticmaalo dhisay-in Camera on iPad iyo Dhibaatooyinka
Shaxda hoose waxay kuu sheegayaa 5 barnaamijyadooda camera hogaanka u iPhone. Fadlan ka eeg.
Seed SNAP 27.9MB 4.5 / 5 macruufka 5, 6
Adobe Photoshop Touch 46MB 4/5 Android 3.1 iyo macruufka
Photo hirgaliyo 2 17 MB 4/5 macruufka 5.0
Photogene 24.3MB 5/5 macruufka 6
iMovie 6.35MB 4/5 macruufka 7.0
App SnapSeed waa mid ka mid ah ugu fiican ee suuqa ee ku rating ugu sareeya. Waxaa kale oo badan hagaajinta iyo fududeeyey la kala dooran karo si fudud lagu dabakho. Si aad u qabsiga, aad si fudud u mari fartaada ka hooseysa ugu sareysa, ka dibna mar kale mari ka bidix ilaa midig si ay simbiriirixan sawirka guud ahaan, sidaa darteed in wax laga beddelo xoogga. Waxay ku siin doontaa sawirada cajiib ah in aadan heli doonaan meel kasta. In kasta oo xaqiiqda ah in uu ku siiyo images wanaagsan, waxaa ka maqan qaar ka mid ah muuqaalada sawir-tafatirka.
Qaababka kale ee muhiimka ah waxaa ka mid ah:
a. Cajiib ah tafatirka. Waxaa ka mid ah beerista, sixiddiisa iyo sinnaanshaha image ka, kaas oo si buuxda u beddeli doonaa sawirkaaga.
b. Google+ Instagram is-dhexgalka. App Tani waxay kaa caawin doontaa in aad si fudud sawiro aad asxaabta iyo qoyska via Instagram wadaagaan.
Baro wax badan oo ku saabsan Snapseed >> ( https://itunes.apple.com/EN/app/snapseed/id439438619?mt=8 )
Waa app ugu dambeeyay in Adobe bilaabay ka dib markii dukaan sawir adobe. Waxaa la yimid muuqaalada camera badan desktop in hagaajin doono sawiro aad. Waxa ay taageertaa muuqaalada, sida autocorrect, qabsiga xushay, wareeg ah usii, xarunta diiradda, retrolux, image habayn, si toos ah iyo isku shaandheyn, stamp Gadzhiyev, layers, iyo suufkayga, Bir, qoraalka, sida diirada kala duwan iyo gradients. Adobe app ee u xiiso badan sameeyo isku-dhafan Touch Photoshop la Facebook, daruur hal abuur leh iyo raadinta Google image.
Baro wax badan oo ku saabsan Adobe Photoshop Touch >> ( https://itunes.apple.com/EN/app/adobe-photoshop-touch/id495716481?mt=8 )
Waxay bixisaa khibrad sawir tafatirka gaar ah. Waxaa caadi ahaan ay isticmaalaan sawir xirfadle sababtoo ah waxa ay ku siin karaan adeegyo tafatirka mobile tayo leh si fudud. Waxa ay taageertaa saamaynta style oo waa dhif ah la daadiyo kale iyo sidoo kale waxay bixisaa adeegyo kale sida; hagaajin sawir (duwan, gooladaha iyo dheelitirka midabka), farsamooyinka processing, clip sii dheer tahay, la saxo isha casaan, lakabyada iyo noocyada filimada. Waxay ku kacaysaa $3.99 sidaas la awoodi karo by badan.
Dheeraad ah ka baro Photoforge 2 >> ( https://itunes.apple.com/us/app/photoforge2/id435789422?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 )
Waa app caadi ah ka mid ah sawir. Waxay leedahay dhowr ah muuqaalada xiiso leh in laguu suurogeliyo in aad resize, midab iyo qabsato sawirada. Waa jaban oo ku saabsan $2.89 iyo fududahay in la isticmaalo. Faa'iidooyinka ay tahay in uu leeyahay dhowr hagaajin, saamaynta, fursadaha tafatirka, presets, doorashooyin la dhoofiyo sida FTP, sida diirada iyo mid si fudud sawirada saaxiibada la wadaagi karto. DeMerit kaliya ee waa in aysan saarnayn sababtoo ah ma uu taageeray.
Baro wax badan oo ku saabsan Photogene >> ( https://itunes.apple.com/us/app/photogene-4/id363448251?mt=8 )
iMovie waa app ah oo u sahli doona in aad qaadataa HD video iyo iyaga itusi in aad ku qanacsan tahay. Waxa ay ku siinaysaa interface cad la thumbnails weyn oo qurux badan. Waxaa ka mid ah dhan-ada, tani waa mid ka mid waa ta ugu fudud oo si fudud loo isticmaali karaa qof. Sifooyinka kale waxaa ka mid ah
Riix laba jeer kala guurka ah si ay u beddelaan muddada.
In loo sahlo in ay isku shaandheyn ama clips dalagga.
Sort dhacdooyinka taariikhda.
Daawo movies HD u dhex.
La wadaag video clips saaxiibadaa.
Baro wax badan oo ku saabsan iMove >> ( https://itunes.apple.com/en/app/imovie/id377298193?mt=8 )
More Apps Camera iPad Waxaad u
1.Camera u iPad
Waxa aan helay iPad ah, laakiin waxay kaa caawin karaan haddii ay kula tahay in aadan ku noolaan karaa iyada oo aan kamarad ah in-dul dhisay iPad. App waa loo isticmaalo iyo waxa loo isticmaali karaa in labada iPad iyo iPhone. Marka aad soo dajiyo app this, aad iPad si fudud u helo karo iyo xirmaan iPhone ah via Bluetooth. Tani waxa ay suurtogelin doontaa in aad aragto wax walba oo camera iPhone la arkay oo sidoo kale ku kaydiso sawirada camera iPhone uu qaatay.
Waa camera ugu fiicnaa ee aan abid la isticmaalo. Way fududahay oo fudud si ay u isticmaalaan. Saar aad iPad meel aad door bidayso iyo sida loo isticmaalo browser ah web oo aad rakibay on your computer si loo xakameeyo kaamirada.
Dad badan oo sida app maxaa yeelay ah qaababka fiican jeclaan: stabilizer, 5 * zoom, saacad, in lays Roobka iyo qaababka kale ee tafatirka.
4.Fastest camera pro
Waxay qaadataa sawir la joogo aad u furo app, taas ayaana ah sababta loogu bixiyey camera ugu dhaqsiyaha badan. Waxa muhiim ah in xaaladda halkaas oo xawaare in loo baahan yahay qaadista sawirrada.
Waa mid ka mid ah app camera ugu fiican ee suuqa ee ilaa hadda ay isticmaalaan sawir kuwaas oo doonaya sawiro tayo leh. Waxay bixisaa noocyo kala duwan oo ka mid ah qaababka sida shot dilaaca, is-qayliso, antishake, geotagging iyo kuwa kale.
Tallaabada 1. Adiga screen guriga, wax yar ka jaftaa icon camera ah si aad u furto. Dooro camera weli slider video / camera halkii video ah
Tallaabada 2. Aim iyo zoom by siyoodba soo jiiday slider ugu hooseysa. Taabo image ah ee shayga mar inaad diirada. Hadda waxaad riixi kartaa batoonka camera ah. Wixii aad si aad u aragto videos hore ama sawiro, aad si fudud u jaftaa doonaa icon ee geeska hoose ee dhinaca bidix ee shaashadda.
Tallaabada 3. Waxaad kaloo ka qaadi kartaa sawiro naftaada la isticmaalayo camera hore. Si aad u bilaabaan camera ah, ka jaftaa button ee geeska midig sare si ay u beddelaan danbe iyo camera hore.
Tallaabada 4. Trabatoni icon qashinka si aad u tirtirto video ama sawir.
Tallaabada 5. Waxa kale oo aad la wadaagi karto sawiro aad by
Aad Booqashada sawir gallery.
Boggan dhex sawiro aad.
Siyoodba Dooro liiska camera iyo sawiro aad rabto inaad la wadaagto doortay.
> Resource > Apps > Top 5 Camera u iPad Apps